Kitapo fitsapana haingana ny antibiotika - BALLYA
Fitsapana antibiotika ho an'ny ronono
Antibiotika Tetracycline dia antibiotika misy karazany maro be vokarin'ny actinomycetes.
Betalactam dingana iray
Antibiotika laktam beta manondro antokon-antibiotika goavambe misy peratra β-lactam amin'ny rafitra simika ao aminy.
Chloramphenicol iray dingana
Antibiotika Chloramphenicol, ao anatin'izany ny chloramphenicol, methanesulfomycin, ary chloramphenicol tsy misy fofona
Ny sulfamethoxazole mitambatra (Sulfamethoxazole Co.) dia fanomanana fitambarana trimethoprim miaraka amin'ny sulfamethoxazole.
Thiamphenicol dia vovoka kristaly fotsy sy fotsy.
Ny tetracycline dia antibiotika? Eny.
Kitapo fitsapana Sulfonamides
Antibiotika Sulfonamide misy vondrona so2-nh2, izay metabolaly ho an'ny atiny alkôma nitrôlôzena miasa ao.
Beta lactamase dia kilasy anzima nafenin'ny bakteria fanoherana ny antibiotika laktam.
Spectinomycine manana fiasa mahery vaika manohitra ny Neisseria gonorrhoeae.
iombonana amin'ny neomycin polymyxine ny vongan-dranomaso amin'ny fitsaboana ny fivontosan'ny maso mora tohina amin'ny steroid.
Ny antibiotika Macrolide manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria amin'ny alàlan'ny fanakanana ny asan'ny peptidyltransferases ao amin'ny 50s ribosome, izay mpiasan'ny bakteria haingana.
Kitapo fitsapana erythromisinzy
Menaka fanosotra erythromycine ophthalmic dia ampiasaina amin'ny trachoma, conjunctivitis, blepharitis, ary areti-maso ivelany.
Kanamycin dia inhibitor biosynthesis proteinina izay miteraka tsy fahatakarana ny kaody mRNA amin'ny fatorana ny ribosome 30S.
Gentamicin dia iray amin'ireo antibiotika mahamay indrindra, ary noho izany dia be mpampiasa amin'ny fanaingoana ny haino aman-jery.
Antibiotika nandromisinina afaka mamehy tsy azo ihodivirana amin'ny faritra 50S an'ny ribosome bakteria ary manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina amin'ny bakteria amin'ny alàlan'ny fanakanana ny hetsika transeptide sy ny famindrana mRNA.
Antibiotika Chloramphenicol ampidiro ny chloramphenicol, sulfomycin ary chloramphenicol tsy misy fofona.
ny tena vokatry ny chloramphenicol dia ny fanakanana ny fiasan'ny hematopoietic tsoka
Aflatoksin M1 dia metabolite hydroxyl an'ny aflatoxin B1, izay hita ao amin'ny ronono na vokatra vita amin'ny ronono ananan'ny biby omena sakafo voaloto.
Aflatoxine amin'ny voanjo no aflatoxine mivantana indrindra azon'ny olona ifandraisana ary tokony horaisina am-pitandremana.
Kitapo fitsapana β-lactamase-Tetracyclines-Test-Kit
Common ny voka-dratsin'ny tetracycline mety misy ny maloiloy, mandoa, marary kibo, mivalana, vay sakafo, sns.
Cefalexins afaka manakana ny tsy fitambaran'ny rindrin'ny sela, mamontsina ny votoatin'ny sela ary mamono, ary mamono bakteria.
Antibiotika Quinolones, antibiotika vaovao, ao anatin'izany ny fitambaran'ny fluorine organika.
Zava-mahadomelina Sulfonamide dia kilasin'ny fanafody simika simika misy hetsika bakteriaostatika, izay avy amin'ny p-aminobenzenesulfonamide.
Kitapo fitsapana Streptomycin +
Streptomycin dia antibiotika aminoglycoside.
Kitapo fitsapana Cefalexin
Cephalexin ampiasaina amin'ny mitsabo aretina isan-karazany ateraky ny bakteria.
Neomycin + Streptomycin
+ Kitapo fitsapana Gentamicin
Neomycine sulfat dia antibiotika aminoglycoside.
Quinolones, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe pyridonic acid na pyridonic acid, dia fanafody antibaktera synthetic misy ny firafitra fototry ny 4-quinolone.
Neomycin + Kanamycin
Gentamicin sulfate manana vokarin'ny bakteria sy bakteria amin'ny karazana bakteria Gram-négatif sy positive.
+ Quinolones +
Vokatry ny erythromycine ahitana soritr'aretina gastrointestinal toy ny fivalanana, maloiloy, mandoa, fanaintainan'ny kibo ambony sy afovoany ary tsy fahazotoan-komana.
Inona no atao hoe antibiotika?
antibiotika manondro kilasy metabolita faharoa novokarin'ny zavamiaina bitika (ao anatin'izany ny bakteria, holatra, actinomycetes) na zavamaniry sy biby avo kokoa izay manana anti-pathogen na hetsika hafa ary mety hanelingelina ny fivoaran'ny sela velona hafa. Fitaovana simika.
Ny antibiotika voajanahary dia misy alkaloida, flavonoid, proteinina, asidra organika ary fitambarana fenolika, izay mety mamono na manakana ny mikraoba sasany nefa tsy manimba ny vatan'olombelona.
Antibiotika synthetic lehibe
Ny antibiotika misy karazany dia manondro zava-mahadomelina miaraka amin'ny fihanaky ny bakteria. Raha fintinina, fanafody maharesy ny ankamaroan'ny bakteria izy ireo.
Ny antibiotika Macrolide
Macrolide ny antibiotika (MA) dia teny iraisan'ny kilasy fanafody anti-bakteria misy peratra lakôtonan'ny karbaona 12-16 ao amin'ny firafitry ny molekiola. Izy ireo dia manakana ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria amin'ny alàlan'ny fanakanana ny asan'ny peptidyltransferase amin'ny ribosome 50s. , Anisan'ny mpiasan'ny bakteria haingana
Amin'ny bakteria, bakteria sulfonamides miasa toy ny mpanakan-tsoratry ny DHP an'ny anzima mifandraika amin'ny synthesis of folate. Noho izany, ny sulfonamides dia bakteria manakana ny fitomboana sy ny famokarana bakteria, saingy tsy mamono azy ireo. Tsy toy ny bakteria ny olona mahazo asidra folika ("vitamina B9") amin'ny sakafo.
Antibiotika laktam beta
antibiotika β-lactams (laktam-) manondro antokon-antibiotika goavambe misy peratra β-lactam amin'ny firafitry ny simika, ao anatin'izany ny penicillins sy cephalosporins be mpampiasa indrindra amin'ny fampiharana ara-pahasalamana, ary koa cephalomycins sy thiomycetes hafa antibiotika yp-lactam atypical hafa toa ny hormonina sy monocyclic laktam-.
Tetracyclines dia kilasin'ny antibiotika misy karazany marobe vokarin'ny actinomycetes, ao anatin'izany ny chlortetracycline, oxytetracycline, tetracycline, ary ny methotomycin derivative semi-synthetic, matanjaka Ny firafitry erythromycine, dimethylaminotetracycline, ary ny toy izany rehetra izany dia misy taolam-baravarankely tetraphenyl.
Quinoline antibiotika, antibiotika vaovao, anisan'izany ny fambolena fluorida biolojika, toy ny l'ofloxacin ('floxacin'), norfloxacin ('noroxin'), ciprofloxacin ('cipro) ary moxifloxacin (' avelox '), dia be mpampiasa eran'izao tontolo izao.
Antibiotika biby fiompy
Antibiotika ho an'ny alika
Ny fanafody antibiotika alika ankapobeny dia misy:
Enfloxacin (Baytril) - aretin'ny taovam-pisefoana, ny hoditra ary ny urinary
Teny lehibe: ratra asidra amoxicillin / clavulanic, aretin'ny lalan-pisefoana, aretin-koditra
Aretina gastrointestinal, aretim-potoana
Clindamycin (antibody) - aretina mikraoba, sela malemy, taolana sy nify
Antibiotika ho an'ny saka
Antibiotika antifungal mahazatra amin'ny saka dia misy:
Fulvisin - aretin-doha
Ketoconzole (Nizoral) - aretin'ny holatra anatiny sy ivelany, aretin'i Cushing
Fluconazole (Diflucan) - aretin-koditra, masirasira ary loha
Amphotericin b (Fungizone) - aretin'ny holatra
Antibiotika ho an'ny bitro
Ny antibiotika voalaza matetika dia misy l 'enrofloxacin ("baytric"), trimethylsulfonamide, chlorobenzene ary metronidazole. Ny antibiotika am-bava azo antoka hafa, toy ny doxycycline, azithromycin na ciprofloxacin, dia soloina indraindray.
Ny ankamaroan'ny antibiotika amin'ny trondro dia mitovy amin'ny an'ny olombelona - amoxicillin, ciprofloxacin, penicillin, indraindray na dia mitovy fatra aza. Ireo pilina ireo dia azo esorina anaty aquarium ary alentehin'ny hoditry ny trondro, na mety hitovy amin'ny an'ny olombelona.
Antibiotika akoho amam-borona ary antibiotika fiompiana
Fambolena akoho amam-borona marobe no manome antibiotika ho an'ny akohovavy mba hisorohana aretina.
Antibiotika ho an'ny osy
Ny antibiotika antifungal mahazatra amin'ny osy dia misy: penicillin, streptomycin, oxytetracycline, chloramphenicol, amycin, gentamicin, Etc.
Amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainana, zanak'omby, omby ary omby dia mety iharan'ny aretin-bakteria, toy ny maso raozy na ratra voan'ny aretina izay mila fitsaboana antibiotika. Ohatra amin'ny antibiotika fampiasa matetika amin'ireto toe-javatra ireto ny penicillin, tetracycline, cephalosporin, fluclonicol, timicillin, enrofloxacin, ary tulip.
Antibiotika ho an'ny kisoa
Ny additives antibiotika dia zinc bacitracin, spiramycin, wikiniamycin, xanthophyllin, tylosin (ho an'ny kisoa), sodium monensin ary avomycine.
Antibiotika ho an'ny soavaly
Ny antibiotika am-bava mahazatra indrindra amin'ny soavaly dia misy trimethylsulfide, metronidazole, l'enrofloxacin ary chloramphenicol. Melamine sulfate (SMZ, TMS, tabitra sulfa) dia antibiotika iray misy hetsika fanoherana bakteria maro karazana.
Inona no ataon'ny antibiotika?
Ahoana no fiasan'ny antibiotika?
Ny antibiotika dia mamono bakteria mampidi-doza na manakana ny bakteria tsy hamokatra, anisan'izany ny fomba fiasa lehibe efatra, dia ny: fanakanana ny sinton'ny rindrin'ny sela bakteria sy ny fanatsarana ny fihanaky ny sela ao amin'ny bakteria, ny fananahana amin'ny bakteria ary ny fanakanana ny famerenana sy ny fandikana ny asidra nokleika bakteria.
Afaka mamono virus ve ny antibiotika?
Ny antibiotika dia tsy afaka mamono viriosy satria bakteria sy viriosy manana fomba fiaina hafa sy velona.
Maharitra hafiriana vao miasa ny antibiotika?
Rehefa manomboka miasa ny antibiotika dia manomboka mihinana azy ianao. Na izany aza, mety tsy dia salama ianao mandritra ny roa na telo andro. Ahoana no hahasitrananao haingana aorian'ny fiovan'ny antibiotika. Miankina amin'ny karazana aretina tsaboinao ihany koa izany.
Rahoviana no mihinana antibiotika?
Aza mampiasa antibiotika fotsiny nomen'ny dokotera anao hitsaboana aretina mikraoba. Mifanakaloza hevitra amin'ny dokoteranao na amin'ny farmasinao momba ny fomba fampiasana antibiotika tsara indrindra. Ny olona sasany dia mila sakafo hampihenana ny voka-dratsy, ny hafa kosa mila vavony foana.
Vokatry ny antibiotika
Ny antibiotika dia miteraka vizana
Ny antibiotika dia mety miteraka reraka. Raha ny marina, ny fatra sasany, toy ny amoxicillin, dia mety hiteraka "Over tired" sy "Under energy", raha ny antibiotika hafa, anisan'izany ny amoxicillin, dia mety hiteraka paralysis ihany koa.
Mety hiteraka fivalanana ve ny antibiotika?
Raha mihinana antibiotika ianao dia hanova kely ny fliranao bakteria ny tsinay, izay mety hiteraka sira malefaka na fivalanana kely mandritra ny andro vitsivitsy. Ireo soritr'aretina ireo dia tokony hijanona aorian'ny fitsaboana antibiotika anao.
Hita izany fa ny antibiotika dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany, toy ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ny fahasalaman'ny biby, ny fiompiana akoho, ny fiompiana, indrindra ny famokarana sakafo. Ronono sy antibiotika no nifantohan'ny resaka hatrany, ary ny fomba tsara indrindra hiatrehana antibiotika izay tsy azo esorina tanteraka dia ny fisorohana ny fihinanana tsy ampoizina. Ballya manome a karazana fitsapana vokatra (Fitsapana ronono) izay mamela antsika hanatratra fitiliana haingana sy marina amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny valin'ny fitsapana dia mifanaraka amin'ny fenitry ny EU, izay azo atao tsara amin'ny fisorohana antibiotika amin'ny ronono. BALLYA koa dia manamboatra fitsapana haingana hafa miorina amin'ny immunochromatography.